अविश्वसनीय माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफहरू: विज्ञान र कला सँगसँगै जानुहोस् | क्रिएटिव अनलाइन
स्केलले विश्वप्रतिको हाम्रो धारणालाई परिवर्तन गर्दछ। हामीले देख्ने प्रत्येक चीजको पछाडि अकल्पनीय आकृतिहरू पत्ता लगाउनु यो अचम्मको कुरा हो। यदि कसैले तपाइँलाई भन्छ कि नुन चौरस सुरुमा छ भने, तपाईं अचम्मित हुनुहुनेछ, हैन? त्यसोभए यो हामी वरपरका सबै चीजहरूको साथ हो। यदि हामीले माइक्रोवर्ल्डमा पुग्ने निर्णय ग .्यौं भने हामीले आसन्न विघटन, हाम्रो एकदमै तत्काल वास्तविकतालाई टुक्रा टुक्रा गर्न र सरल रूपहरूमा विभाजन गर्छौं जुन फलस्वरूप अझ सरल टुक्रामा विभाजित हुन्छ। यो निरपेक्ष विज्ञान हो, तर के हुन्छ यदि हामी हाम्रो संसारको यो आयामलाई अमर पार्ने निर्णय गर्छौं? के यो कला बन्न सक्छ र तुलनात्मक र वैज्ञानिक विश्लेषणबाट बाहिर आउने केहि बताउँछ? स्पष्ट कुरा के हो भने यसले हामीलाई अनिवार्य प्रतिबिम्बमा पुर्‍याउँछ र जो कोहीले पनि यी माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफहरू देख्छन् उत्सुकता जगाउँदछ।
त्यसो भए मँ यस प्रकारका फोटोग्राफीका केही उदाहरणहरू तपाईंलाई छोडिदिन्छु। म निश्चित छु कि तपाईले यो अत्यन्तै प्रेरणादायी पाउनुहुनेछ र तपाईको जवजलाई अवलोकन गर्न र नयाँ र फरक दृष्टिकोणबाट हाम्रो विश्व अवलोकन गर्न बाध्य पार्नुहुनेछ।
नुन १ 150० गुणा बढ्यो
कलम times० पटक बढाईयो
सेतो चिनी 50० पटक बढ्यो।
नायलॉन 50० गुणा बढ्यो।
पेपरकोर्न १ 15 पटक बढ्यो।
जमिन कालो मिर्च 5.000,००० पटक म्याग्निफाइ गरियो।
ग्राउंड कफी 750० पटक बढ्यो।
काठ १ 150० गुणा बढ्यो।
पाठ कागजमा मुद्रित गरियो र १००० पटक म्याग्निफाइ गरियो।
कपडा २०० पटक बढाइयो।
परागकण 400०० गुणा बढ्यो।
र्याकको किनारा १०,००० गुणा बढ्यो।
मानव जुँगा 500०० पटक म्याग्निफाइ गरियो।
काटिएको कपाल times० पटक बढ्यो।
पुरानो तामाको सिक्काको सतह 5.000००० गुणा बढ्यो।
फल फ्लाई 3.000,००० पटक म्याग्निफाइ गरियो।
कपास कपडा 40 पटक म्याग्निफाइ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » अविश्वसनीय माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफहरू: विज्ञान र कला सँगसँगै जानुहोस्